जहाँ टेलिभिजनमा समाचार प्रस्तोताले भित्री वस्त्र नै लगाउदैनन् ! | News Nepal
एजेन्सी । सुन्दा अचम्म लाग्ला, हेर्दा झन चकित पार्छ । तर वास्तविकता हो । अल्बानियाको एक टेलिभिजनमा कार्यरत समाचार प्रस्तोताले भित्रि वस्त्र विना नै समाचार वाचन गर्छन् ।
अल्बानियाको ‘फायर’ टेलिभिजनले यस्तो नियम ल्याएको तीन वर्ष भयो । पहिले–पहिले पुरै कपडा लगाएर समाचार वाचन गरिने भए तापनि तीन वर्ष यता भने सवै ‘न्यूज एंकरहरु’ले भित्री वस्त्र विना नै समाचार वाचन गरिरहेका छन् ।
रमाइलो कुरा त के छ भने समाचार पढ्ने सवैलाई समान नियम बनाइएको छ । चाहे पुरुष होस् वा महिला नै किन नहुन् भित्री वस्त्र विना नै समाचार वाचन गर्नुपर्छ ।
तीन वर्ष पहिलेदेखि यसरी समाचार वाचन गर्ने नयाँ तरिका ल्याइए पनि केही समय यता यो टेलिभिजनमा कार्यरत एक समाचार वाचिक भने अहिले निकै भाइरल भएकी छिन् ।
उनको समाचार पढ्ने शैलीले भन्दा पनि भित्री वस्त्र विनाको समाचार वाचनले चर्चा बटुलेकी हुन् । उनी हुन्– २४ वर्षीया ग्रेटा होक्सा ।
समाचार वाचनका क्रममा उनले एउटा ब्लेजरमात्र लगाएकी हुन्छिन् । शुरुमा उनी केही हेडलाइन पढ्छिन् । उनको पहिरनले भित्री अंग छोप्न मुस्किल परिरहेको अवस्था हुन्छ ।
समाचार पढ्नु अगाडि उनले भनेकी थिइन्, ‘यो ख्याल राख्छु कि म किन मिडियामा काम गरिरहेकी छु ? हामी यहाँ केही तथ्य गर्न खोजिरहेका छौं ।’
यो टेलिभिजन च्यानलले समाचारको प्रभाविकारिताका लागि तीन वर्षको अवधिमा होक्सा जस्ता धेरै समाचार प्रस्तोता तयार पारिसकेको छ । त्यस्तै, होक्सालाई माथ खुवाउने समाचार प्रस्तुत गर्थिन् अर्की समाचार वाचिका– इन्की ब्राकाज ।
समाचार वाचनको समयमा उनी झन बोल्ड बन्थिन् । बोल्ड शरीरकै कारण ‘प्लेब्वाई म्यागेजिन’मा तस्वीर खिचाएपछि उनले टेलिभिजनको जागिरबाट हात धुनु परेको थियो । टेलिभिजनको नियम उलंघन गरेको भन्दै उनलाई टेलिभिजन व्यवस्थापनले जागिरबाट निकालिदिएको थियो ।
यो टेलिभिजनमा कार्यरत प्रमुख प्रस्तोताहरु टपलेस भएर समाचार वाचन गर्दा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाप्रति व्यवस्थापक कत्ति पनि चिन्तित छैनन् । किनकी अहिलेसम्म कुनै घटना घटेको पनि छैन र त्यहाँका स्थानीयले समेत समाचारको नयाँ शैलीलाई साथ दिएका छन् ।
निमुखा जनताको पीडामा सरकार मूकदर्शक ‘मूकदर्शक भएर बस्योः सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निमुखा जनताको पीडामाथिको दर्शक भएको बताएका छन्। कोरोना...
बालुवाटार जग्गा प्रकरण: यी हुन् जेल चलान हुने पहिलो प्रतिवादी
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा तत्कालीन मालपोत अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल जेल चलान भएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश...
मेलम्ची खानेपानी आयोजना: मुख्य सुरुङमा पठाइयो पानी
काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य सुरूङको परीक्षण सोमवार गरिएको छ । आयोजनाको मुहान क्षेत्रबाट केही तल रहेको पहिलो...
सोमबारको भाग्यफल कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशीफल
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) ऋण,रोग तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ भने यहि बेलामा आयस्रोतका बाटाहरु साघुरा हुनेछन् । व्यापार व्यावसायमा समय दिन नसक्दा घाटा...
टुटल र पठाओ अब निर्वाध चल्ने, रोक्ने कदमबाट यसरी पछि हट्यो सरकार
काठमाडाैं । सरकारले मोबाइल एपमार्फत भाडामा यात्रु ओसारपसार गर्दै आएका राइड सेयरिङ टुटल र पठाओलाई यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न दिने...